St. Kitts & Nevis: tsy misy fetra amin'ny isan'ny mpandeha fitsangantsanganana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Saint Kitts sy Nevis Breaking News » St. Kitts & Nevis: tsy misy fetra amin'ny isan'ny mpandeha fitsangantsanganana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Saint Kitts sy Nevis Breaking News • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny protokol fitsangatsanganana amin'ny famerenana indray ny fizahan-tany fitsangantsanganana dia tsy mametra ny isan'ny mpandeha avela hiditra ao amin'ny Federasiona amin'ny sambo fitsangantsanganana.
St. Kitts sy Nevis dia nanazava ireo kavina fitsangatsanganana an-tsambo androany.
Tsy marina ny bilaogy Royal Caribbean, tamin'ny 2 Aogositra 2021.
St. Kitts & Nevis dia niara-niasa tamin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny sambo fitsangantsanganana rehetra mba hanamorana ny fiverenan'ny fizahan-tany fitsangantsanganana.
Nanazava i St. Kitts & Nevis androany fa tsy misy fetrany ny isan'ny mpandeha afaka miditra ao amin'ny Federasiona amin'ny sambo fitsangantsanganana mandritra ny fanokafana indray ny sehatry ny fizahan-tany fitsangantsanganana.
The Royal Caribbean bilaogy, tamin'ny 2 Aogositra 2021, milaza ny “St. Kitts dia nanambara politika vaovao izay mamela ny vahiny 700 hitsidika ny nosin'izy ireo isaky ny sambo. Ny Allure of the Seas dia mandeha amin'ny 8 aogositra izao izao dia hamangy an'i Philipsburg, St. Maarten, "tsy marina izany.
Ny minisitry ny fizahantany, fitaterana ary seranan-tsambo, ny manan-kaja Lindsay FP Grant dia nanamarika fa: "Ny protokol fitsangantsanganana amin'ny fiverenan'ny fizahan-tany fitsangantsanganana dia tsy mametra ny isan'ny mpandeha avela hiditra ao amin'ny Federasiona amin'ny sambo fitsangantsanganana. Ny fanapaha-kevitry ny Royal Caribbean momba ny Allure of the Seas tsy hiantso seranana any St. Kitts tamin'ny 8 aogositra 2021 nandeha sambo dia tsy noho ny fahaizan'ny mpandeha an-tsambo 700 mahery isaky ny sambo. "
Niara-niasa tamin'ny St. Kitts & Nevis Royal Caribbean ary ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny sambo fitsangantsanganana rehetra mba hanamorana ny fiverenan'ny fizahan-tany fitsangantsanganana an-tsambo. Miandrandra ny fandraisana ny Allure of the Seas sy ireo sambo fitsangantsanganana hafa ny Federasiona raha mitohy ny fisokafany.